के को बाहुन, के को कामी, के को जनजाति, कति राम्रो दमाईको छोरो ..............
गणेश नेपाली सोमबार, चैत २३, २०७७
के को बाहुन के को कामी के को जनजाती ।
जातको कुरा गर्नेहरु देशका लागि घाती ।
जातका कुरा गर्नेको दिमाक कहाँ छ?
मेरो छोराले कमिनी ल्यायो
मेरी छोरी नि दमाइसित गई
मैले गुर्सिनी ल्याएकै हो
हामी नेपाली हौं मलाई त्यत्ति थहा छ
हुन्न हुन्न मेरो घरमा जातको कुरा हुन्न..........
यो लोक दोहरी गीत गायक पशुपति शर्मा र गायिका देविका के.सी.ले गाएर विद्युतीय माध्यमबाट प्रसारण भएपछि यो गीतको प्रसंशा र त्यत्तिकै कटु आलोचना पनि भयो। यो गीतको यति धेरै विरोध भयो कि यसलाई सामाजिक संजालमा राखेर पनि हटाईयो।वर्तमानमा यो गीतको श्रव्य दृष्य युट्युबमा हेर्न र सुन्न सकिने तर डाउनलोड, शेयर र सेभ गर्न नसकिदो रहेछ। आजको मितिमा पनि यो गीत प्रतिबन्धित जस्तै छ। गीतले दिन खोजेको संदेश नेपाली समाजमा व्याप्त जातीय विभेद र छुवाछुतलाई समाजबाट निर्मूल गर्ने प्रशंसनीय उद्देश्य नै हो । यसका निम्ति गायक पशुपति शर्मा र गायिका देविका के.सी. प्रसंशाको हकदार हुनुहुन्छ ।
नेपाली समाजमा विशेष गरेर हिन्दू धर्म मान्नेहरू जातका आधारमा सामाजिक मर्यादा क्रममा सानो ठूलो, तल्लो माथिल्लो सोपानमा रहेर जीवन पद्धतिको अभ्यास गरिरहेका छन्। यो पद्धतिले यस्तो जात व्यवस्था निर्धारण गर्‍यो कि ज्ञान आर्जन गर्ने र बाड्ने एकाधिकार भएको जात सर्बोच्च, शासन गर्ने र कृषी, बन्द व्यापार गर्ने जात दोस्रो र तेस्रो मर्यादाक्रममा पर्दछन् । अन्तिम क्रममा पारिएको जातले यी तीन जातको सेवा मात्र गर्न बाध्य बनाईनु, सीप र कलाले समृद्ध प्रविधिको श्रोत जात सबभन्दा तल रहनु अनि चौथो क्रमको जातिलाई अन्य जातले जातिय विभेद र छुवाछुत गर्नुपर्ने प्रथा हिन्दु वणर्ाश्रम जात व्यवस्था हो ।
अमानवीय व्यवस्थाले सबभन्दा तल्लो सोपानमा पर्ने कला र सिपले युक्त प्रविधिले समृद्ध जात समुहलाई छुन नहुने, छोईएको खण्डमा छोइ छिटोले छर्केर छोईनेले शुद्धिकरण गर्नुपर्ने, पकाइएको खानेकुरा नचल्नु, धार्मिक अनुष्ठानमा निषेध गरिने, मन्दिर प्रवेश गर्न नदिईने, पधेरा छुन नदिईने लगायतका विभेद त छदै थिए कथम् कदाचित दलित र गैर दलित युवा युवतीहरुले लुकिछुपी गरेका प्रेम पत्ता लागेको खण्डमा र त्यस्ता प्रेमहरू विवाहमा परिणत भए भने अन्तरजातीय प्रेम विवाह गर्न पुग्ने दलित परिवार केटापक्ष वा केटीपक्ष जोसुकै भएपनी दलित परिवार र दलित युवा युवती ले पाउने सास्ती उत्पिडन यातना आज पनि पाशविक र निर्लज्जता पूर्वक हाम्रो समाजमा घट्नु र पिडकहरूले त्यस्ता मानवता विरूद्धका अपराधलाई सामान्य रूपमा लिईरहनु ले पूणर् लोकतान्त्रिक लाग्ने संविधान भएको देशमा पिडित समुदाय टुलुटुलु हेरेर बस्दैन्। न्यायका लागि पुग्नु पर्ने ठाउँसम्म पुग्छन्। विडम्वना न्याय पाउन यति गाह्रो हुन्छ कि पिडितहरू नियती ठान्न बाध्य हुन्छ्न् ।
सारमा नेपाली समाजमा दलित समुदाय प्रति जुन सामाजिक दृष्टिकोण छ राज्यसत्ता पनि त्यस्तै दृष्टि अनुशरण गरिरहेको छ। न्याय दिने ठाउँ भनेकै या त समाज हो या त राज्यसत्ता नै हो। दुबै ठाउँमा न्याय दलित समुदायका लागि अति कठिन भैरहेको अन्यायपूणर् अवस्थाका विरूद्ध माथी उल्लेखित गीत रचना गरिएको हुनुपर्छ, गाईएको हुनुपर्छ र सामाजिक संजालमा प्रसारण गरिएको हुनुपर्छ। सुधारवादी साहित्य र कलाले अभिव्यक्त गर्ने सौन्दर्य भनेको उत्पिडन विरुद्धको सौन्दर्य हो। त्यो न्यायिक सौन्दर्य पशुपती शर्मा र देविका के.सी.को कणर्पृय स्वरमा प्रकट भयो। अवश्य पनि त्यो गीतले अन्तरजातीय विवाहको विरोध गरिरहनेहरूको घोर विरोधको सामना गर्नु परे होला । आश्चर्य त यो छ कि जातीय विभेद र छुवाछुतको कारण यातना, अवहेलना, शोषण, दमन, अपमान सहन बाध्य समुदायले पनि पशुपती शर्माको क्रान्तिकारी लाग्ने गीतको मर्मलाई किन अस्वीकार गर्‍यो? सोच्न बाध्य बनायो। हुन त यो गीतको तत्कालिन चर्चा सेलाई सकेको विषय हो। तथापि जब जातीय विभद र छुवाछुतका बारे साहित्य र कला क्षेत्रले पार्ने प्रभाव सम्बन्धमा बहस र छलफल हुन्छ त्यतिबेला पशुपती शर्मा र देविका के. सी. ले गाएको यो गित बारे पनि चर्चा हुन थाल्दछ ।
मिति २०७७ पौष १ गतेको दिनको दिन पत्रकार एवम् सामाजिक अभियन्ता समता फाउण्डेसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मिलन परियारले समता फाउण्डेसनका अध्यक्ष प्रदीप परियार, संयोजक विकास राई र प्रकृति मगर संग धनगढीमा छलफल हुने वातवरण बनाई दिनुभयो। उहाँहरू दलित सशक्तिकरण विधेयक सुदुरपश्चिम प्रदेशमा पनि सरकारले शिघ्र प्रदेश सभामा प्रवेश गराई छिट्टै ऐन बनाउनुपर्छ भनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीलाई स्मरण पत्र बुझाउन काठमाण्डौबाट धनगढी पुग्नुभाथ्यो। उहाहरू संग नेपाली साहित्य बारे पनि कुराकानी भैरहदा काठमाण्डौमा नेपाली साहित्य र कला बारे जातीय विभेद छुवाछुत का विरुद्ध लेखिएका कृति र गाईएका गितको बारेमा आलोचना निकै भएको देखियो ।
ऐलानी र नथिया उपन्यासको र माथिको गीतको यति अचाक्ली विरोध किन हुन्छ? त्यसमा पनि पिडित समुदायबाटै किन यस्तो विरोध भयो? सोचनीय विषय हो भनी उहाहरू संग जिज्ञासा राख्दा विकास राईले जुन समुदाय माथी विभेद, अपमान, अत्याचार, उत्पिडन, दमन भई रहेको छ वा भएको थियो त्यही समुदायले अनुभुती अभिव्यक्त गर्दा त्यो अभिव्यक्तिले बलिस्ठ प्रभाव पर्छ भन्ने आसय प्रकट गर्नुहुदा वास्तविक हो भन्ने पनि लाग्यो। किन भने न्यायिक निकायहरूमा न्यायको याचना पिडितले नै गर्नुपर्ने प्रावधान विद्यमान छ। यस अर्थमा विरोधको प्रयोजन ठिकै थियो। लोक गायक राजु परियारले र गायिका टीका पुनले कति राम्रो दमाईको छोरो बाटुम क्या हो मायाको डोरो,कती राम्री मगरकी छोरी बाटुम क्या हो मायाको डोरी“ गीत गाउदा कहि कतैबाट विरोध भएन। सचेत लाग्ने दलित समुदायले विस्थापन गरिरहेका जात सुचक दमाई, कामी, सार्की, गाईने, वादी लगायतका शब्द मध्ये दमाई शब्दको प्रयोग यस गीतमा पनि आएकै छ । कतिपय ठाउका कार्यक्रमहरूमा राजु परियारलाई यहि गीत गाउन अनुरोध गरिने गरेको छ। राजु परियारले प्रतिनिधित्व गर्ने समुदाय र गाउनुभएको गीतले अनुभुती गर्नेका तर्फबाट गाईएको भनी समाजमा सहजै स्वीकारिएको भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
आहुतीको विचार भने यस सवालमा भिन्न छ दलित साहित्य भनेको जात व्यवस्था उन्मुलनका लागि सिर्जना हुनुपर्दछ भन्ने छ। र पशुपती शर्मा र देविका के सीले गाउनु भएको जस्ता गीतलाई उत्पिडन विरुद्ध मानविय आकाँक्षा भनेर भन्नुभएको छ। शर्माको गीत आवाज विहिनहरूको आवाज पनि हो। यस गीतको औचित्यलाई आहुतीकै विचारले पनि जायज पुष्टि गर्दछ। उहाँ भन्नुहुन्छ अनुभुति भएकैले साहित्य सिर्जना गर्ने हो भने समाजका शोषक, पिडक, अत्याचारी सामन्तहरूको भुमिका अनुभूति गरेर कला र साहित्य सिर्जना हुने कुरा होईन ।
पिडितका पक्षमा साहित्य लेखिदा पिडितले न्याय पाउन आवश्यक छ भनेर जोसुकैले सिर्जना गर्दा नि हुन्छ । वास्तविकताको अभिव्यक्तिका लागि अनुभुती पनि त्यत्तिकै आवश्यक हो र चेतना र शिक्षाको अभाव भएको समुदाय जो सदियौं देखि दमन शोषणको कुचक्रमा फसेको छ त्यस समुदायबाट आज नै सोचे जति कला र साहित्य सिर्जना हुन नसकेको अवस्थामा फरक समुदायबाट कला साहित्य सिर्जना हुनु धेरै अर्थमा प्रसंशनीय छ। उत्पिडन विरुद्ध अनुभुति गर्नेहरूको सिर्जनाका लागि सम्बन्धित समुदायलाई सिर्जना गर्न उत्प्रेरित गराउन पनि अनुभुतिबाट सिर्जना हुनुपर्छ भन्ने विचार आउदा त्यसलाई पनि अत्यन्तै मार्गदर्शक मानिनु पर्दछ ।
निष्कर्षमा अन्यायका विरुद्ध, दमन र शोषणका विरुद्ध, कला र साहित्यको सिर्जना सबैले गर्नु आवश्यक छ। समाज रुपान्तरणमा सबै सुधारवादी, क्रान्तिकारी सिर्जना र सबै समुदायका सर्जकहरूलाई सबैतिरबाट प्रोत्साहन आवश्यक छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत २३, २०७७, २१:११:००